ARIANA GRANDE သည် ၂၀၀၉-၂၀၁၉ မှဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကသင့်အားရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည် - သတင်း
2009-2019 ကနေ Ariana Grande ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသင် SHOOK ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်
Ariana Grande သည်ယခုအချိန်တွင်အကြီးမားဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ သူမသည်အားလုံးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေစဉ်, hit ပြီးနောက် hit ဖြန့်ချိပါတယ် အလွန်အများပြည်သူ Pete Davidson နှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက် နှင့်စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း သူမ၏ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ Mac Miller ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
အရာတစ်ခုမှာသော်လည်းသေချာသည်, Ariana ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတသမတ်တည်းအသွင်အပြင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, မည်သည့်အခါသမယတွင်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော။ ဒါပေမယ့်လူတွေဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်သူမရဲ့သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ပြခဲ့ကြတယ်။ ပင် blackfishing နှင့်နှိုင်းယှဉ်။
ပြီးတော့သူမတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်းပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူမကြည့်လိုက်တာကိုမြင်နိုင်ပါတယ် ရှိပါတယ် အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ် ဤသည် 2009 မှ 2019 သို့ Ariana Grande ၏အသွင်ပြောင်း၏အချိန်ဇယားဖြစ်ပါသည်:
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် Ariana သည်မျက်နှာသစ်လွင်နေပြီးသူမနှစ်အနည်းငယ် ၀ တ်ထားသောအနီရောင်ဆံပင်မရှိ။ ဤသည်မှာသူသည် Nickelodeon ကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည့် Cat Valentine အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
သူမမှာ YouTube ချန်နယ်တစ်ခုရှိပြီး၊ သူမမှာဗီဒီယိုများပုံမှန်လွှင့်တင်သည်။
သီချင်းများနှင့်ဗစ်တိုးရီးယားသရုပ်ဆောင်များနှင့်အတူသီဆိုဖျော်ဖြေနေသည့်အထိ။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များနည်းတူ Ariana သည်မျက်ခုံးမွှေးများကို ၀ တ်ဆင်သည်။
Ariana သည်နှစ်ပတ်လျှင်သူမ၏ဆံပင်ကိုအနီရောင်ဆိုးစေရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Victorious ပြပွဲတွင်ထုတ်လုပ်သူများသည်သရုပ်ဆောင်တစ်ခုလုံးကိုအနက်ရောင်အဖြစ်မခံချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးရာသီအပြီးတွင်အာရီယာနာသည်သူမ၏ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း, သူမသည်လည်း YouTube တွင်သီချင်းအဖုံးများကိုရုပ်ရှင်နှင့်တင်သည် ။
Ariana သူမကိုလွှတ်လိုက်သည် Put Your Hearts Up လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဂီတဗီဒီယို သူမခရမ်းရောင်ဆံပင်နှင့်သိသာအနည်းငယ်လိမ္မော်ရောင်, အတု tan ရှိပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏အထင်ကရပုလဲပုတီးဝတ်ထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းစားရမယ်ဆိုတာ
သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်သူမသည်သီချင်းနှင့်ပူးတွဲပါသောဂီတဗီဒီယိုကိုမုန်းသည်ဟုဝန်ခံသည်။ သူမကအဲဒါကိုခေါ်တယ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် Rolling Stones အင်တာဗျူးတွင်သူမဘဝ၏အဆိုးရွားဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
Ariana နေဆဲ Nickelodeon ရဲ့အောင်ပွဲနှင့်ဖြန့်ချိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဗစ်တိုးရီးယားတရားမျှတမှုနှင့် LA Boyz ဟုခေါ်သောတေးဂီတဗီဒီယို။ သူမလည်းပေးသည် Cambio Goes Home နှင့်အတူအိမ်သို့အလည်အပတ်ခရီး။ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တိုမှာသူမမှာအနီရောင်တောက်တောက်နေပြီ။
Ariana သူမ၏ပထမဆုံးစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ သူမ၏သီချင်း The Way Mac Miller ပါ ၀ င်သောအမေရိကန် Billboard Hot 100 တွင်နံပါတ် (၁၀) တွင်စတင်ခဲ့သည်။
သူမသည်သူမ၏ဆံပင်ကိုအညိုရောင်သို့ဆေးဆိုးပြီးအဆုံးသတ်ကောက်သည့်နေရာတွင်မြင့်သော ponytail ထဲတွင်ထည့်သည်။ ဂီတဗီဒီယိုအတွက် Ariana သည်သူမ၏ပုလဲနားကပ်နှင့်သူမ၏ဆံပင်တွင်ပန်းရောင်လေးတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။
ဤသည် Ariana ရဲ့စတိုင်လျော့နည်းအပြစ်မဲ့နှင့်နည်းနည်း edgier ရရှိသွားတဲ့ရှိရာနှစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်လွှတ်ပေး Iggy Azalea နှင့်ပြProbleနာ , ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ချက်ချင်း hit ဖြစ်လာသည်သော။ သူမသည်ယခင်ကထက်လမ်းပိုမိုကြေးဝါကြည့်ရှုသည်။
In Break Free အတွက်ဂီတဗီဒီယို Ariana ရဲ့ဆံပင်ကို ombred နှင့်သူမ၏လက်မှတ်ကြည့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အလွန်မြင့်မားသော ponytail အတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည်အဘို့အများအတွက်မဲမှောင်နှုတ်ခမ်းကိုလည်းဝတ်ဆင် Love Me Harder, The Weekend ပါသောသီချင်း ။ နှင့်သူမ၏ကြောင်ခေါင်းကိုအနည်းငယ်ပွဲစေသည်။
Ariana ထုတ်ပြန်သည် နောက်ဆုံးအချိန် ။ သူမ၏နှုတ်ခမ်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုများပြားနေသည်။
သူမသည်သိသိသာသာသူမ၏မျက်ခုံး winging စတင်သည်။
ယနေ့ခေတ်ချီကာဂို @ultabeauty မှရပ်တန့်လိုက်ပြီးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော့်အမွှေးအကြိုင်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! သင်မယုံနိုင်စရာပဲ! သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်လုံလောက်သောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မရပါဘူး။ ???? #Ari ဒါ့အပြင် .... ချီကာဂိုရှိ Roosevelt ရုစဗဲ့စတိုးဆိုင်၌ကျွန်ုပ်၏ကလေးငယ်များအတွက်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
မျှဝေသည် Ariana Grande (@arianagrande) ကိုအောက်တိုဘာ ၂ ရက်၊
ယခုနှစ် Ariana ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Into You အတွက်ဂီတဗီဒီယိုတွင် သူမ၏အသားအရေသိသိသာသာမှောင်ကြည့်ရှုသည်။
သူမလည်း ဘေးထွက်ရန် Side မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သော ဤမျှလောက်များစွာသောလိင်မှုကိစ္စကိုသင်ကိုယ်တိုင်မလျှောက်နိုင်ပါ။ ဗီဒီယိုထဲမှာသူမကနီကီ Minaj ထက်မဲမှောင်နေတာကိုလည်းသတိပြုမိလာတယ်။ ယခု Ariana တွင်မြိတ်တစ်ခုအပြည့်ရှိပြီးအပြည့်အ ၀ မြိတ်နှင့်မြင်နိုင်သောမျက်ခွံတိုးချဲ့မှုများရှိသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Nicki Minaj ရိုက်ကူးခဲ့သောပုံတွင်သူမအစ်မဖြစ်နိုင်သည်။
မျှဝေသည် Ariana Grande 8:14 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 20, 2016 ရက်တွင် (@arianagrande)
Ariana လည်းဇာ chokers ပိုပြီးဝတ်ဆင်စတင်ခဲ့သည်။
ပိုပြီးအားကစားဝတ်စုံနှင့် hoodies ထည့်သွင်းရန် Ariana ရဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်အသွင်ကူးပြောင်းမှု။
'Duck' • okkkkrrrr •ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤအတွေ့အကြုံအားကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်သည်။ မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ် ဥရောပ၊ ဘရာဇီးနှင့်ယူအက်စ်တွင်နောက်ဆုံးပြပွဲ ၃ ခုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး၊ (ဤအရာသည်နောက်ဆုံးပြသမည့်အမေရိကန်ပြပွဲ ၃ ခုပါ ၀ င်သည်ကိုအတိအကျဖော်ပြရန်လိုသလား။ ) ၎င်းတို့အတွက်သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါ့နှလုံးအရမ်းပြည့်ဝပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီညမင်းကိုတွေ့မယ် ATL! p.s. ငါသည်သင်တို့ကို @littlemix @jadethirlwall @leighannepinnock @perrieedwards @jesynelson @victoriamonet ကိုချစ်တယ်
မျှဝေသည် Ariana Grande 10:27 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 12, 2017 ရက်တွင် (@arianagrande)
Ariana ဟာသူမရဲ့တစ်ကိုယ်ရေ No Tears Left To Cry အတွက်ပလက်တီနမ်ရွှေရောင်ဆံပင်ရှိပါတယ်။
သို့သော် ၂၀၁၈ အများစုအတွက်သူမ၏ဆံပင်သည်သူမ၏သဘာဝအရောင်ဖြစ်သည်။
Ariana Grande (@arianagrande) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 7:11 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 6, 2018 ရက်တွင်
သူမသည်သူမ၏လက်မှတ်မြင့်မားသော ponytail တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူကျီ။ သူမရဲ့ဆံပင်ကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ရှည်လျားတယ်။
မျှဝေသည် Ariana Grande 11:54 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 5, 2018 ရက်တွင် (@arianagrande)
များအတွက်ဗွီဒီယိုထဲမှာ ၇ လက်စွပ် , Ariana ရဲ့မျက်ခုံးတစ်ဖြောင့်ပုံသဏ္takeာန်ယူသူမကကြီးမားသောကွင်းပုတီးကျီ။ သူ၏နှုတ်ခမ်းများသည်အလွန်မှည့်သောပုံနှင့်ကြည့်သည်။
မိတ်ကပ်၏ Ariana ၏အသုံးပြုမှုကသူသည်မျက်လုံးပုံသဏ္slightlyာန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်တူသည်ကိုမြင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သူမကို ပို၍ ပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြောင်မျက်စိပေးသည်။
မျှဝေသည် Ariana Grande 6:37 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2019 ရက်တွင် (@arianagrande)
• Ariana Grande သည်ငါးမန်းတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများဖြစ်သည်
• သူမ၏ Pepsi ကြော်ငြာအပေါ် Kendall Jenner ၏ 'စိတ်ဒဏ်ရာ' သည်ဖျော်ဖြေမှုအဖြူအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ၏ပြယုဂ်ဖြစ်သည်
• အခြားအနုပညာရှင်များ၏ဒီဇိုင်းများကိုခိုးယူသည်ဟု Kardashians ယဉ်ကျေးမှုအရသိမ်းယူထားခြင်းသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသည့်အချိန်များအားလုံးသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်